केन्द्रीय नेतृत्वको असक्षमता स्पष्ट देखियो ः उपेन्द्र चौलागाई (पूर्व केन्द्रीय प्रतिनिधि ने.नि.क.यु.सं डोल्पा, हाल बर्दिया) — Motivate News
केन्द्रीय नेतृत्वको असक्षमता स्पष्ट देखियो ः उपेन्द्र चौलागाई (पूर्व केन्द्रीय प्रतिनिधि ने.नि.क.यु.सं डोल्पा, हाल बर्दिया)
Posted on April 12, 2017 by motivate news
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को केन्द्रीय समितिको निर्वाचन कहिले निर्वाचन होला ? तपाई पुर्व केन्द्रीय प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यका हिसाबले सातौं महाधिवेशन छैठौं महाधिवेशन जत्तिकै भव्य रुपमा सम्पन्न हुन सक्ला ?
यस संगठनको छैटौं अधिवेशनमा बन्दशत्र भएन, आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमा छलफल नै गरिएन, यसमा केही तानाशाही प्रवृत्ति जस्तो देखियो यसले हामीलाई चित्त दुखेको छ । अहिले केन्द्रीय नेतृत्वको असक्षमताको पराकाष्ठा स्वरुप नै देखियो । यसरी पटक पटक तोकिएको मितिमा पनि सातांै अधिवेशन हुन नसक्नु हाम्रो संगठनको लागि दुर्भाग्य हो । सातौं अधिवेशन भब्यताका साथ सम्पन्न हुने त परेकै कुरा नेतृत्वले अधिवेशन नै गराउन नचाहेको त पुष्टि जस्तै भइसक्यो । अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्व आफ्नो समयावधि लम्व्याउने, अधिवेशन हुन नदिने, भइहाले पनि कसरी आफ्नो झुण्डलाई अगाडि ल्याउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएकाले सातौं अधिवेशनले सबै निजामती कर्मचारीहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरेर खाली झारा टार्ने खालको हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु ।
तपाई क्रियाशील रहेको बर्दियामा युनियन (संघ) को स्थिति कस्तो छ.?
बर्दिया जिल्लामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को संगठन मजवुत छ । संगठन विस्तारमा यहाँका सम्पूर्ण सदस्यहरु इमान्दारिताका साथ क्रियाशिल छन् तर विगतमा भएको आर्थिक अपारदर्शिताको कारण वर्तमान कार्यसमितिले समेत असहजता महसुस गर्नु परेको छ । साथै केन्द्रीय नेतृत्वमा मौलाएको चाकडी रुचाउने प्रवृत्तिले गर्दा यहाँ रहेका हाम्रो संगठनका साथीहरुमा पनि उदाशिनता र नैराश्यता देखिएको छ । यसरी केन्द्रमा हुने गुट उपगुटको कारणले संगठनलाई कमजोर तुल्याउदै लगेकोले यसप्रति केन्द्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन बर्दियामा युनियन (संघ) ले प्राप्त गरेको मत संतोषजनक हुन हो ? के यस जिल्लामा प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरु नै नभएका नै हुन् त ?
अन्य जिल्लाको तुलनामा बर्दिया जिल्लामा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई हेर्दा जीत हासिल नभए पनि यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
अब हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा समग्र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न जिल्ला तथा केन्द्रीय युनियन (संघ) को कस्तो भूमिका हुनपर्ला ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) रहेका केही नेतृत्व वर्गमा ब्यक्तिगत स्वार्थ देखिएको छ, यसलाई हटाउनैपर्छ । ब्यक्तिगत भन्दा सांगठनिक स्वार्थलाई केन्द्र विन्दुमा राखिनुपर्छ, यस क्षेत्रमा कार्यरत संगठनका साथीहरुको समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ, चाकडी र चाप्लुसी गर्नेलाई काखा र नगर्नेलाई पाखा नीतिको अन्य गर्नैपर्छ, इमान्दार र संठगनको लागि खटेर काम गरेका साथीहरुको उचित मूल्यांकन हुने पद्धतिको विकास अनिवार्य गरिनुपर्छ । बेलुका भएपछि सुरा सुन्दरी हैन संगठन विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेर रचनात्मक तथा गतिशील नेतृत्वको छनौट गर्न सकेको खण्डमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा सर्वत्र अगाडि हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात युनियन (संघ) को निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा तपाई कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
मैले माथि नै भनिसकेको छु । वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्व अधिवेशनप्रति उदाशीन छ । यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने संगठनका लागि त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुँदैन । आशा छ नेतृत्वले यो निर्णयलाई पक्कै पनि कार्यान्वयन गर्छ होला । अहिले हाम्रा धेरै साथीहरुमा देखिएको निराशालाई हटाउन जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन ।
सातौं अधिवेशन जेठमा हुने सकेन भने श्रावण, भाद्र, आश्विनमा सरुवा हुन्छ यसले केही असर हुन्न ?
आशा गरौं अधिवेशन यसपटक पक्कै पनि होला । यदि कथंकदाचित भएन भने सबै प्रतिनिधिहरुको विशेष भेला गरेर पनि यो समस्याको हल गर्नैपर्छ ।
अहिलेका प्रतिनिधि र अध्यक्ष भएका कर्मचारीहरु जागिर राजीनामा गरी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएमा युनियन (संघ) मा के हुन्छ ?
दुई चार जना साथीहरु जागिर छोडेर स्थानीय चुनावमा जाँदैमा संगठन कमजोर हुने होइन । यो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । हरेक जिल्लामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) मा धेरै सक्षम र योग्य साथीहरु हुनुहुन्छ ।
युनियन (संघ)को केन्द्रीय कार्यसमितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न कस्तो भुमिका खेलेको छ ?
मेरो विचारमा अहिले हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका साथीहरुले यस विषयलाई खासै वास्ता गरेको देखिन्न । उनीहरु कसरी अरुलाई लडाएर आफु नेतृत्वमा रहिरहने भन्नेमै केन्द्रित भएको मैले महसुस गरेको छु । सारमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी जनतालाई कसरी सुशासन दिने भन्नेमा यसले असहले खासै भूमिका खेलेको जस्तो लाग्दैन ।
युनियन (संघ ) ले अहिलेसम्म केही सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गरेको छ ?
बेला बेलामा रक्तदान गर्ने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप पिडितलाई सहयोग जस्ता कार्यहरु त गरेको छ तैपनि यत्रो ठुलो संगठनले जसरी यसलाई देशभरि नै यस्ता सामाजिक कामहरु गरेर आफुलाई अब्बल सावित गर्नुपथ्र्यो त्यो चाँहीगरे गर्न सकेको छैन भन्ने मेरो धारणा छ ।
संगठन सुदृढीकरणमा युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, पारिवारिक नातागोतालाई स्थान सुरक्षित गर्नकै लागि प्रयास गरेका कारण आधिकारिक युनियनमा लज्जास्पद पराजय भएको भन्ने सुनिन्छ , के यो सत्य हो ?
तपाईको यस कुरामा केही सत्यता छ । मुख्यकुरा काम गरेर देखाएका र देखाउन सक्ने साथीहरुको उचित मूल्यांकन पद्धतिको विकास नहँुदा जिल्लाहरुमा सक्षम साथीहरु पनि अलि निष्कृय रहनुभयो यसले हामीलाई धेरै घाटा गराएको हो ।
क्रियाशील सदस्यहरुको समस्यामा जिल्ला तथा केन्द्रले ध्यान दिएको छ ?
हामीले हाम्रा विषयमा ध्यान देउ भन्ने भन्दा पनि यो मूल केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका साथीहरुले सोच्ने कुरा हो । संगठनलाई कसरी जुझारु बनाएर लैजानै भन्नेमा उनीहरुको ध्यान जानुपर्ने हो ।
कर्मचारी यूनियन संघको आसन्न सातौ अधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउला ?
अहिलेसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा गुट र उपगुटबाट प्रेरित नेतृत्व नै आउला जस्तो लाग्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरुले गुटलाई होइन सक्षमलाई नेतृत्वमा पु¥याउन आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र सक्षम र सवल नेतृत्व आउला ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका केही पदाधिकारी र अध्यक्ष समेतको मिलोमतोमा आयु लम्ब्याउने खेल रोक्न आम प्रतिनिधी लाग्नु पर्ने होइन र ? के अध्यक्ष पदाधिकारीसँग प्रतिनिधीहरु डराएकै हुन् ?
प्रतिनिधिहरु भन्दा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमै रहेका साथीहरु डराएका हुन् जस्तो लाग्छ । नत्र अहिलेसम्म अधिवेशन भइसक्थ्यो । वारम्वार अधिवेशन सर्दा पनि सामाजिक संजालमा ठुलठूला कुरा गर्ने, मूल नेतृत्वसँग कुरा गर्नै डराउने केन्द्रीय समितिका साथीहरुको दोधारे चरित्रले समेत यसको आयु लम्ब्याउन मद्यत गरेको छ । जिल्लाका प्रतिनिधिहरु अधिवेशन गराउनु पर्छ भन्नेमा एकजुट छन् तैपनि हुन सकिरहेको छैन ।
आधिकारिक टे«ड युनियनको महासचिव तपाईकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राजनैतिक मजदुर अधिकार जस्तै श्रम ऐनमा निजामती शब्द राख्ने कुरा उठेको थियो यसमा त युनियन (संघ)को धारणा प्रष्ट आएन किन होला ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन मृत अवस्थामा छ । यस्तो युनियनको कुरा नै नगरौं । अब कुरा रह्यो निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को आधिकारीक धारणा के भन्ने विषय यसमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले जिल्लाका साथिहरुको राय समेत लिई निर्णय लिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुखद् कुरा हो ।
१६ देशको दुर दराजमा रहेर काम गरेका कर्मचारीको समस्यामा केन्द्रीय नेतृत्वले ध्यानै दिँदैन भन्ने ती क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको आरोप छ सत्य के हो ?
यस विषयमा हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यान नपुगेकै हो । यसैकारण नै यहाँका कर्मचारीहरु धेरै निराश भएका हुन् ।
तपाईहरुको विधानबाट पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई किन हटाइएको हो ?
विगतमा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरुले राम्रो काम गरेनन् वा केन्द्रीय नेतृत्वको चाकडी गर्न सकेनन् त्यसैले हटाइयो होला ।
केही जिल्ला अध्यक्ष लगायत समितिलाई जबरजस्ती खारेज गरियो रे । सत्य के हो ?
यो हाम्रो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) मा मौलाउदै गएको गुट र उपगुटको नतिजा हो ।
युनियनका प्रतिनिधि सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बस्नेहरुले पैसा कमाउन छन् रे सत्य कुरा के हो ?
यो कुरामा सत्यता छ । नकमाउने भए इमान्दार र क्रियाशील साथीहरुले दुःख पाउनु पर्ने थिएन ।
अन्तमा केही थप कुरा भन्नु छ ?
अबपनि अधिवेशनको मिति नसरोस् सातौं अधिवेशनले स्वच्छ, नैतिकवान र चारित्रवान नेतृत्वको छनौट गर्न सकोस् संगठनमा मूल्यांकन पद्धतिको विकास होस् भन्ने कुरालाई म जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छु ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Leaveareply